Ministry Bans Importers for Providing Forged Documents | Myanmar Business Today
HomeBusinessMinistry Bans Importers for Providing Forged Documents
Ministry Bans Importers for Providing Forged Documents
Department of Trade under the Ministry of Commerce on August 14 has placedathree-month ban on importers, warned by the FDA for providing forged or incorrect documents, from applying for import licenses through the online system.
FDA has warned companies who provided incorrect or forged documents required when applying for Import Recommendation (IR).
The Department of Trade issuedafood import license per the Food and Drug Administration’s IR. It also has announced the negative list for the goods that required import license on May 21, 2019, at https:www.commerce.gov.mm.
Surgical mask, PPE, hospital used beds, ventilators, and accessories and equipment do not require import license to import as they as not into the negative list.
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့မှစ၍ စာရွက်စာတမ်းများ မမှန်မကန်တင်ပြမှုကြောင့် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနက အထူးသတိပေးထားသော ကုမ္ပဏီများအား Fully Online စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခွင့် (၃) လ ရပ်ဆိုင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။
စားသောက်ကုန်များအတွက်သွင်းကုန်ထောက်ခံချက်IRလျှောက်ထားရာတွင်လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတန်းများ မမှန်မကန်တင်ပြမှုများကြောင့်ကုမ္ပဏီတချို့အား FDA မှ အထူးသတိပေးခံရခြင်းများရှိနေကြောင်းသိရသည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေး ဉီးစီးဌာနသည်ကုမ္ပဏီများ၏ စားသောက်ကုန်များပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့် သွင်းကုန်လိုင်စင်အား အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွတ်ကဲရေးဦးစီးဌာန FDA ၏သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် IR ထောက်ခံချက်ဖြင့် ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးလျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ပြည်ပမှ မှာယူ တင်သွင်းရာတွင် လုပ်ငန်းလွယ်ကူ လျင်မြန်ချောမွေ့စေရေးအတွက် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုအပ် သော ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း (Negative List) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်မေလ ၂၁ နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ထားပြီး https:www.commerce.gov.mm တွင်လည်း ကြေညာထားပြီးဖြစ်သည်။
(Negative List) တွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါက သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန် မလိုဘဲ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပြီး ဖြစ် သည်။
Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထားဆီးရေးအတွက် အဓိကလိုအပ်သော Sugical Mask (HS-6307904000) ၊ PPE (HS-6211439000, 3926903900) တို့ကိုလည်းကောင်း၊ လူနာကုတင်၊ ဆေးရုံသုံး အသက်ရှုစက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ၊ ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများကို လည်းကောင်း သွင်းကုန် လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် မလိုအပ်ဘဲ တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပြီး ဖြစ်သည်။
Previous articleMIC Approves $20 Mln and K158 Bln Investments
Next articleMinistry Allows Jewelry and Artworks Export with L/C